नेपाल आज | ईन्जिनीयर नै भन्छन– पानी परेका बेला कालोपत्रे अनुचित (भिडियोसहित )
ईन्जिनीयर नै भन्छन– पानी परेका बेला कालोपत्रे अनुचित (भिडियोसहित )
सडक स्वदेशी, साधन–जनशक्ति विदेशी
बुधबार, २५ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
अहिले देशभर असारे विकासको लहर छ । अर्थात, विकासका नाममा जथाभावी सडक बनाएर बजेट सकिँदैछ । आकाशबाट झमझम पानी परिरहेको छ, अर्कातिर सडकमा धमाधम कालोपत्रे भइरहेको देखिन्छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उप प्राध्यापक एवम सडकमा विशेषज्ञता हासिल गरेका इन्जिनियर रोशन कार्की भन्छन्, ‘यो लाजमर्दो हो । पानी परेका बेला कालोपत्रे गरिदैन । कालोपत्रे गर्दा धुलो र पानीबाट बचाउनु पहिलो शर्त हो । त्यस्तै, तापक्रम ५ डिग्री भन्दा बढी हुनुपर्छ । वर्षामा धुलो र तापक्रमको मापदण्ड पुगे पनि पानीबाट बचाउने असम्भव जस्तै छ । यसरी काम गर्नु हुँदैन । बजेटै सिध्याउन जे पनि त गर्नु भएन । ’
‘असारमा मात्र सडक निर्माण गर्ने चलन हटाउनुपर्छ । यसका लागि कम्तिमा एक वर्ष अघि नै योजना बनाउनुपर्छ । कहाँ कुन क्षेत्रमा कस्तो सडक बनाउने हो ? त्यसका लागि बजेट कति ? कार्यविधि के ? कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, ठेकेदार लगायतका विषयको टुंगो पहिल्यै लगाइसक्नु पर्छ । अनि अनुकूल मौसममा सडक बनाउने, कालोपत्रे के के गर्ने हो सबै गर्नुपर्छ । यसले बजेटको सदुपयोग पनि हुन्छ, काम पनि गुणस्तरीय हुन्छ ।’ इन्जिनियर कार्की भन्छन् ।
अचेल केही इन्जिनियरहरु भेट भयो कि हामीहरु यही विषयमा छलफल गर्छौ । कम्तिमा चैत बैशाखतीर आर्थिक वर्ष सकिने भए कति राम्रो हुन्थ्यो । अझ, कतिपय ठाउँमा त इन्जिनियर बिना नै काम हुने गरेको छ । ठेकेदारले इन्जिनियरको काम गरिरहेको पनि देखिन्छ । कतिपय ठेकेदारहरुले इन्जिनियरलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास पनि गर्छन् । विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट पनि इन्जिनियरलाई दबाब आउने गर्छ । कम इष्टिमेट तयार पार्ने, सामग्री प्रयोग, बाटो कताबाट लैजाने लगायतका विभिन्न सवालमा दबाब आउने गर्छ । कतिपय इन्जिनियरहरुलाई यो प्रकारका प्रभाव र दबाब झेल्न कठिन भएको समेत देखिएको छ ।
नेपालमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ प्रायः सबै विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । अलकत्रा, फलाम, डण्डी, उपकरण लगायतका निर्माण सामग्री मात्र होइन जनशक्तिसमेत विदेशबाट आउने गरेको छ ।
इन्जिनियर कार्की भन्छन्, ‘हामीकहाँ सडक होस वा कुनै भवन निर्माण जहाँ पनि धेरैजसो भारतीय कामदार छन् । सामान ओसार्नेदेखि निर्माणका महत्वपूर्ण ठाउँमा उनीहरु नै छन् । दिनको हजार, बा¥ह सय मज्जाले कमाइरहेका छन् । हामी नेपालीलाई भने लाज लाग्छ । यो विडम्बना हो । ’
कार्कीका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पनि गलत प्रयोग भैरहेको छ । यस्तो कार्यक्रमको पैसा झार उखेलेर कसैलाई पैसा दिएर सिध्याउनु भन्दा उनीहरुलाई सीप, तालिम दिनमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी दिएको तालिम वा सीपले उसले आय आर्जनको काम गर्न सकोस । हाम्रो देशमा निर्माणको क्षेत्रमा सीप जानेका काम गर्न सक्नेहरुको अभाव छ । रोडको क्षेत्रमा होस वा भवन निर्माण जहाँ पनि कामदारको अभाव छ । रोजगार कार्यक्रमले त्यो क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर भएपनि तालिम दिएको भए धेरैले सधैंका लागि रोजगारी पाउँथे । ’
अर्को महत्वपूर्ण कुरा विदेशी कम्पनीले हात हालेका प्रायः सबैजसो सडकमा प्रश्न उठेको छ । उदाहरणका लागि मुग्लिन नारायणगढ र काठमाडौं कोटेश्वर सडकखण्ड । दुवै सडक चिनियाँ कम्पनीले बनाएका हुन् । अहिले मुग्लिन नारायणगढको मर्मत लगभग पूरा भएको छ भने निकै आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भनिएको कोटेश्वर कलंकी सडकखण्ड सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण छ ।
विदेशीले बनाएका सडकको गुणस्तर, संरचना र योजनामा नेपाली पक्षले प्रश्नसमेत उठाउन सकेका छैनन् । यसमा सडक विभागको कमजोरी देखिन्छ । सडक निर्माण गर्नुअघि नै बन्ने योजनामा कि सडक विभागले ध्यान दिंदैन कि त बोल्ने आँट गर्न सक्दैन ।
अहिले स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म सडक निर्माणको लहर छ । गाउँमा त डोजरे विकास समेत भन्ने गरिन्छ । केही स्थानीय निकायमा इन्जिनियरिङ अध्ययनसहित काम भैरहेको भएपनि अधिकांश स्थानीय तह ठेकेदार र जनप्रतिनिधिको लहडमा चलिरहेका छन् । यसले व्यापक आर्थिक अनियमितताको पनि संकेत गरेको छ ।
इन्जिनियर कार्की भन्छन्, ‘ बलियो र गुणस्तरीय सडक बनाउन सबैभन्दा पहिले योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । जति लगानी र समय खर्चिनुपर्ने हो, योजनामा गर्नुपर्छ । योजना राम्रो भए संरचना आफैं राम्रो हुन्छ । हामीकहाँ योजनामा लगानी नगर्ने, संरचना निर्माणमा चाहिँ बजेट खन्याउने चलन छ, यो अन्त्य गर्नुपर्छ । ’